Boky 5 momba ny fitiavan-tanindrazana navoaka tamin'ny taona lasa | Bezzia
Maria vazquez | 08/04/2021 12:00 | ankehitriny
Isam-bolana dia manangona vaovao momba ny literatiora any Bezzia izahay mba hahitanareo rehetra ilay nahafinaritra anao ny famakiana. Satria ho antsika izay manana boky eo am-pelatanana foana dia mahafinaritra ny mamaky, na dia tsy mahazo aina aza ny famakiana. Satria na dia tsy mahazo aina aza dia misy ny asa ilaina ary feo mahaliana re. Ary tsy manana ahiahy isika fa ho ao anatin'io vondrona io ireo boky dimy momba ny vehivavy.
1 Fitiavana vehivavy. Fampidirana fohy ny fotokevitra politika
2 Fitiavan-tanindrazana mavitrika
3 Fitiavana Silamo
4 Mifanena ny vehivavy miady
5 Mijery ho vehivavy
Fitiavana vehivavy. Fampidirana fohy ny fotokevitra politika
Mpanoratra: Jane Mansbridge sy Susan M. Okin
Mpamoaka: Pejy Indómita
Amin'ity boky ity dia roa amin'ireo manam-pahaizana momba ny vehivavy mahery indrindra no mamintina ireo sangan'asa izay navoakany momba ilay raharaha ary avereno jerena ny fandraisan'anjaran'ireo mpandinika sy fitoviana vehivavy samy hafa. Notarihin'ny fahaleovan-tena sy ny tsy fanjarian-tsoa izay tena ilaina ankehitriny eo amin'ity sehatra ity sy amin'ny maro hafa, asehon'ny mpanoratra amintsika ny teboka iraisana sy ny fizarana fizotran'ny vehivavy samy hafa ary manome fanazavana momba ny foto-kevitra politika izay nandray andraikitra lehibe tokoa. ny sehatry ny daholobe.
Mpanoratra: Ana Requena
Ny taona vitsy lasa izay dia ny fahanginan'ny fahanginana: vehivavy manerantany an'arivony no nizara ny zavatra niainany tamin'ny herisetra sy fanorisorenana ara-nofo. Saingy io kabary io, ilaina, dia tsy maintsy miaraka amin'ny iray hafa: ny an'ny fahafinaretan'ny vehivavy. Manoloana ny fampihorohoroana ara-nofo, mametraka eo ambony latabatra ny faniriana vehivavy, fizakantena, ny zon'ny vehivavy iharan'ny firaisana sy fahafinaretana fa tsy zavatra fotsiny. Tsy mora ny làlana: ny firaisana ara-nofo dia iray amin'ireo fitaovam-piadiana fitondra-drazana hifehezana ny vehivavy.
Noho io antony io, ankehitriny mihoatra noho ny taloha, dia mila manamafy ny tantaran'ny vehivavy iray isika izay mamela antsika hiady amin'ireo fomba fijery mbola manavesatra antsika, manangana ny faniriana sy ny fomba ifandraisantsika ary mandresy ny zon'ny fahafinaretana. Angamba izany no mahatonga ny kilalao fanaovana firaisana toy ny Satisfyer izay miteraka fahatsapana ary manampy ny vehivavy handrava ny fady amin'ny filokana. Saingy tsy maintsy miresaka momba ny lafiny hafa koa isika: matetika ny vehivavy dia mampiasa ny zon'izy ireo maniry hihaona amin'ny lehilahy. Ghosting, fanamavoana, fiandrasana tsy ara-drariny, valifaty, tsy fahafaham-po na firaisana ara-nofo tsy misy fikolokoloana iota no sasany amin'ireo fanehoan-kevitra hitantsika. Inona no niova tamin'izany? Ary inona no azontsika atao?
Mpanoratra: Asma Lamrabet, Sirin Adlbi Sibai, Sara Salem, Zahra Ali, Mayra Soledad Valcárcel ary Vanessa Alejandra Rivera de la Fuente
Ny feminista Silamo dia a hetsika fanavaozana, ara-panahy sy politika, izay teraka tamin'ny fiverenany ho amin'ny loharanon'ny Silamo, amin'ny fananganana fiaraha-monina maro ankehitriny. Tsy toy ny tian'ny Tandrefana sy ny fahefany, amin'ny mania manitatra, fanjanahana ary imperialista, manaiky ny fitovian'ny miralenta i Silamo. Ny feminisma silamo dia mifototra amin'ny fandikana ny Koran, manasongadina ny fiandohana ara-tsosialy sy ara-politika amin'ny fanavakavahana ny vehivavy, miorina amin'ny fandikana patriarka ny boky masin'ny silamo.
Amin'io lafiny io dia hetsika iray manamarina ny andraikitry ny vehivavy, mifototra amin'ny fitsipiky ny fitoviana amin'ny lehilahy, misy amin'ny fomban-drazany marina. Ny hevitr'izy ireo dia ny fandikana ny finoana silamo nandritra ny taonjato maro tamin'ny fomba patriarka sy misogynistic, ka nanodinkodina ny hafany ara-panahy. Ity fanodikodinana ity dia mikendry ny hampitombo ny fahasamihafana, ankoatry ny fitazonana ny vehivavy tsy ho a fandraisana anjara mitovy amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny fiarahamonina Silamo.
Mifanena ny vehivavy miady
Mpanoratra: Catalina Ruiz-Navarro
Ao amin'ity boky ity, Catalina Ruiz-Navarro, iray amin'ireo feo malaza indrindra amin'ity hetsika ity tany Amerika Latina, mandeha, avy amin'ny fijoroana ho vavolombelona lalina sy marina, lalana iray izay miresaka amin'ny vatana, hery, herisetra, firaisana ara-nofo, tolona mpikatroka ary fitiavana. Ho setrin'izany, mpihetsiketsika iraika ambin'ny folo, anisan'izany i María Cano, Flora Tristán, Hermila Galindo ary Violeta Parra, izay asehon'i Luisa Castellanos tsara tarehy, nanandratra ny feon'izy ireo ary naneho fa ilaina ny miresaka momba ny vehivavy, ilaina izany, ny fanoherana.
Ity boky torolàlana momba ny vehivavy amerikana latina ity dia famakiana mamindra, manelingelina, manontany; no torolàlana maharitra ho an'izay te-hiresaka momba ny dikan'ny hoe vehivavy eo amin'izao tontolo izao.
Mijery ho vehivavy
Mpanoratra: Nivedita menon
Mirindra, eklektika ary mirotsaka an-tsehatra ara-politika, ny mahita ny maha-vehivavy dia boky feno fahasahiana sy malalaka. Ho an'ny mpanoratra Nivedita Menon, ny feminista dia tsy resaka fandresena farany amin'ny patriarika, fa ny a fanovana tsikelikely ny tontolon'ny fiaraha-monina manapa-kevitra ny hiova mandrakizay ireo rafitra sy hevitra taloha.
Ity boky ity dia manamarina an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso feminista, eo anelanelan'ny fanandramana mivaingana amin'ny fanjakan'ny vehivavy any India sy ireo fanamby goavana amin'ny fivavahan'ny vehivavy manerantany. Manomboka amin'ny fiampangana ny fanorisorenana ara-nofo amin'ireo olo-malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka hatramin'ny fanamby ateraky ny politika ny vehivavy, manomboka amin'ny fandraràna ny voaly any Frantsa ka hatramin'ny fikasana ny hametraka ny sisin-dambanao amin'ireo mpilalao ho akanjo tsy maintsy atao amin'ny fifaninanana badminton iraisam-pirenena, manomboka amin'ny politika somary goavambe ka hatramin'ny mpiasa mpiasa an-trano amin'ny hetsika Pink Chaddi, Menon Mampiseho amim-pahakingana ny fomba hanamafisana sy hanodananan'ny vehivavy ny sehatra rehetra ny fiaraha-monina ankehitriny.
Efa namaky ny iray tamin'izy ireo ve ianao? Nahafinaritra ahy ny feminista silamo volana lasa izay ary manana boky hafa momba ny vehivavy ao amin'ity lisitra ity aho. Satria mahaliana foana ny mihaona amin'ny feo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy amin'ny kolontsaina izay tsy mitovy amin'ny antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Boky 5 momba ny fitiavan-tanindrazana navoaka tamin'ny taona lasa
Recipies hatao amin'ny ankizy